December 2011 | ပျူနိုင်ငံ
Posted by ကိုအောင် at 16:20 8 comments
The_ROPE from Minn_Thaik on Vimeo.
(*ရန်ကုန် လူနေမှု စနစ်သစ်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော
လွတ်လပ်ရုပ်ရှင် ... THE ART of FREEDOM FILM FESTIVAL 2012)
Posted by ကိုအောင် at 15:34 1 comments
Labels: ဓာတ်ပုံများ, ရုပ်ရှင်-ဝေဖန်ရေး
Posted by ကိုအောင် at 17:515comments
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က သူ၏ ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်
များထဲတွင် ထူးထူးခြားခြား အဖြစ်အပျက်တချို့ ရှိခဲ့ဖူးသည်၊
တကယ်တော့ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်မှ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်
အထိ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ပွဲတော်ရက်များကို သူ
ဘယ်တော့မျှ လက်လွတ်မခံခဲ့၊ အမိ မြန်မာပြည်၌ နေထိုင်
ခဲ့သော ကာလများတွင်လည်း ဤပိတ်ရက်များတွင်
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော အဖြစ်အပျက်များထဲ၌ အချိန်ပြည့်
သူ ရှင်သန်ခဲ့သည် ...
သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်သည့် သူ့ဖခင်နှင့် ဖခင်ဖက်မှ
ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများက ဤကာလ ညဉ့်နက်ပိုင်းများတွင်
ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းသော တေးသံသာများဖြင့် သူတို့
အိမ်ထံ သယ်ဆောင်လာခဲ့သော သူ၏ ငယ်စဉ်ဘ၀သည်
**** … `အသဲနှလုံးတံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ကိတ်မှန့်
အနီရောင်ကို လူစုံချိန်မှာ ရွှေဓါးလေးနဲ့ မင်း တအားလှီးခဲ့
တာ … အားလုံးက လက်ခုပ်တီးတာ ငါအတွက် စိုးရိမ်းစရာ …
ဟု သီဆိုသော အဆိုတော် ကိုင်ဇာ၏ တေးသံများက သူ့နား
ထဲတွင် ဟောင်းနွမ်းမသွားခဲ့ … အပြစ်ရှိသူ … ကျူးလွန်သူတို့
ကိုယ်စား ပေးဆပ်ရဲသော သခင်၏ မွေးနေ့ပွဲတော် ကာလတွင်
ပျော်ရွှင်စရာများအပ မည်သည့်အရာမျှ မကြီးစိုးနိုင် …. ****
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က သူနှင့် သူ့အလုပ်မှ မန်နေဂျာတို့သည်
ဤ ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်များထဲတွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက်
တစ်ခုကို ကြုံတွေ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသည်၊ ဤပိတ်ရက်များအတွင်း
အလုပ်၊ ကျောင်းများနှင့် ဈေးဆိုင်များက ဆက်တိုက် ပိတ်ထား
လေ့ရှိသောကြောင့် အိမ်သုံး ပစ္စည်းတစ်ခုခု အရေးပေါ် လိုအပ်ပါက
လွယ်လွယ်ကူကူ မရရှိနိုင်၊ သူတို့ အလုပ်ထဲမှ သူ့မိတ်ဆွေ မန်နေဂျာ
၏ ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့် သူ နေထိုင်ရာမြို့မှ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ၀န်းကျင်
ခန့်ဝေးသော တောမြို့လေး တစ်မြို့၏ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်း
များ သိုလှောင်ထားရာ ဂိုဒေါင်သို့ သူတို့ နှစ်ဦး သွားရောက်ခဲ့ကြ
သည်၊ အိမ်မှ သူတို့ စတင်ထွက်လာစဉ်က ညနေ (၃)ခန့်၊ သို့သော်
ဥရောပ မြောက်ဖျားနိုင်ငံများ၏ ဒီဇင်ဘာ ညနေခင်းများက အလင်း
ရောင် လုံးဝမရှိ၊ သူတို့လိုချင်သော အိမ်သုံး ကုန်ပစ္စည်းများကို
ရောင်းချပေးဖို့ သဘောတူထားသော နေရာက လမ်းကြောင်း
ပြ မြေပုံ G.P.S တွင် လုံးဝ မပြ၊ ထိုကြောင့် G.P.S ထဲတွင်
ထိုလမ်းအမည်နှင့် တခြား အိမ်အမှတ်တစ်ခုကို ထည့်ရိုက်ပြီး
မှန်းဆမှုဖြင့် ကားမောင်းခဲ့ကြသည် ….
အချိန်တစ်နာရီစွန်းစွန်း ကားမောင်းနှင်းအပြီး ထိုတောမြို့လေး
ဆီ သူတို့နှစ်ဦး ရောက်သွားခဲ့ကြသည်၊ ဖျော့တော့တော့ ထွန်းညှိ
ထားသော မီးအိမ်ငယ်များ ချိတ်ဆွဲထားသည့် အိမ်ငယ်လေးများ
ပြည့်နှက်နေသော ထိုတောမြို့လေး၊ သူတို့နှစ်ဦး မောင်းနှင်း
လာသော ကားမီးရောင်ကို မသိကျေးကျွန်ပြုနိုင်သော ခြံဝန်းတချို့
ဆီမှ ခွေးဟောင်သံများ၊ ကွဲကွာနေသော မိသားစုဝင်များဖြင့် ပြန်
လည် ဆုံစည်းမှု ညစား စားပွဲများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ထိုတောမြို့
လေးထဲတွင် သူတို့ကားကို လှည့်ပတ် မောင်းနှင်ရင်း သွားရမည့်
လိပ်စာကို မည်သို့ စုံစမ်းရမှန်း သူတို့နှစ်ဦးသား အဖြေရှာမတွေ့ …
အိမ်တစ်အိမ်ရှေ့ ကားထိုးရပ်ပြီး လူခေါ် ခေါင်းလောင်းကို နှိပ်လိုက်
သည့်အခါ တစုံတယောက်ကို အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်နေသည့်
မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် အိမ်တံခါးကို ရုတ်တရက် ဆွဲဖွင့်လိုက်သော
တုန်တုန်ရီရီဖြစ်နေသည့် အဖွားအိုတစ်ဦး …
`အမေ၊ ကျနော်တို့ ဒီမြို့က မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီမြို့က လိပ်စာတစ်ခုဆီ
သွားချင်လို့ပါ၊ အမေ့ကို အနှောက်အယှက် ပေးသလို ဖြစ်သွားခဲ့ရင်
ကျနော်တို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါနော် … ´
သူတို့နူတ်ဖျားက အမေ ဟူသော ခေါ်ဝေါ်မှုကြောင့် မျက်ဝန်းထဲ
မျက်ရည်များ ပြည့်နှက်သွားသော ထိုအဖွားအိုက သူတို့ ပြသသော
စာရွက်ပေါ်က လိပ်စာကို ဖတ်ရင်း …
`သားတို့၊ ဒီလမ်းအတိုင်း တည့်တည့်သွား … ပြီးရင် ဘယ်ချိုး၊ လမ်းဆုံ
ရောက်ရင် ညာဖက်ကို ပြန်ကွေ့၊ အဲဒီလမ်းမကြီးအတိုင်း မောင်းသွားလို့
သစ်တောအုပ်တစ်ခုကို တွေ့ရင် အဲဒီသစ်တော အစွန်းက အတွင်း
ထဲ ၀င်ရမယ့် လမ်းသွယ်လေး တစ်ခု တွေ့လိမ့်မယ်၊ အဲဒီလမ်းထဲ
၀င်လိုက်၊ လမ်းထိပ်မှာ အိမ်တစ်ဆောင် ရှိတယ်၊ အဲဒီအိမ် မဟုတ်ဘူး၊
လမ်းသွယ်လေးရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ တွေ့ရမယ့် အဆောက်အအုံက
လူလေးတို့ သွားချင်တဲ့ အိမ်လိပ်စာ … ´
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဟူသော စကားလုံးများ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း
သော ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူး အခါသမယ ဖြစ်ပါစေလို့
ဆုတောင်းစကားများကို အဖွားအိုအား လက်ဆောင်ပေးရင်း
သူတို့ ကျောခိုင်းထွက်ခွာခဲ့ကြ၊ တိုးညှင်းစွာ ပိတ်သွားသည့်
တံခါး၏ အခြားတစ်ဖက်တွင် အဖွားအိုသည် အမှန်တကယ်
ပျော်ရွှင်နေသလော … သူမ၏ မျက်ဝန်းအိမ်ထဲမှ မျှော်လင့်ခြင်း
ဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော မျက်ရည်စများရော တစုံတယောက်
အတွက် ဆက်လက် သိုမှီသိမ်းဆည်းထားသလော … သူတို့နှစ်ဦး
အဖွားအို ပြောလိုက်သည့် လိပ်စာအတိုင်း လမ်းမကြီးပေါ်က
တောအုပ်တစ်ခုကို ကျော်ကာစ လမ်းသွယ်လေးတစ်ခု၊ လမ်းထဲ
၀င်ကာစ လမ်းထိပ်တွင် ရှိသော အိမ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း သူတို့
နှစ်ဦး အနည်းငယ် ပျော်ရွှင်သွားသလို၊ ခရစ်စမတ် သစ်ပင်နံဘေး
တွင် ဆော့ကစား ပြေးလွှားနေသော ခြံဝန်းထဲက ကလေးငယ်
နှစ်ဦး၊ ရုတ်တရက် သူ့နံဘေးတွင် ကားမောင်းလာသော သူ့
မိတ်ဆွေက ကားကို ထိုခြံနံဘေးတွင် ထိုးရပ်ရင်း ခြံထဲက
ကလေးငယ်များကို သူတို့သွားရမည့် လိပ်စာကို မေးမြန်း
ဖို့ ကြံရွယ်လိုက်ပုံရသည်၊ ရုတ်တရက် ထိုးရပ်လိုက်တဲ့ သူတို့
ကားကို ကြည့်ရင်း ကလေးငယ်နှစ်ဦး သူတို့ အိမ်ထဲ ပြေးဝင်
သွားသည်၊ သူ့မိတ်ဆွေလည်း ထိုအိမ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်သွား
သည်၊ သူကတော့ ကား ကတ်ဆတ်မှ ခရစ်စမတ် တေးသံများ
ကို နားထောင်ရင်းဖြင့် ကားပေါ်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည် …
ဆယ်မိနစ် … ဆယ့်ငါးမိနစ် … မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ကြာသည့်
အထိ သူ့မိတ်ဆွေ ထိုအိမ်ထဲမှ ထွက်မလာသေး …
သူ လုံးဝ စိတ်မရှည်တော့ပါ၊ ဖုန်းခေါ်ကြည့်တော့ ဖုန်းမကိုင်၊
ကားဟွန်းကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဆက်တိုက်တီးလိုက်တော့
ခပ်ကျဲကျဲ ခြေလှမ်းများဖြင့် ထိုအိမ်ထဲမှ ပြေးထွက်လာ
သည် … `ခင်ဗျားကလည်း ကြာလိုက်တာဗျာ၊ သူတို့က
ခင်ဗျား အသိတွေလား … ´ဟု သူက ပြောလိုက်တော့ သူ့မိတ်ဆွေ
က ဘာမျှ မတုန့်ပြန်၊ ထိုလမ်းအတိုင်း သူတို့ နှစ်ဦး ကားဆက်
မောင်းသွားတော့ လမ်းအဆုံးတွင် ဈေးဝယ်ဖို့ ချိန်းဆိုထားသည့်
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများရှိရာ ဂိုဒေါင်သို့ ရောက်သွားခဲ့ကြသည်၊
သူ့မိတ်ဆွေနှင့် ထိုဂိုဒေါင် ပိုင်ရှင်တို့ အတန်ကြာအောင် စကား
ပြောနေသည်ကို တွေ့ရသည်၊ ဘာတွေ ပြောနေသည်ကို သူ
မသိပါ၊ သူတို့ အလိုရှိသော ပစ္စည်းတချို့ကို ၀ယ်ယူအပြီး ထိုလမ်း
အတိုင်း ပြန်လည် ထွက်ခွာလာခဲ့သည် …
လမ်းသွယ်လေးထိပ်ကို သူတို့ကားရောက်တော့ လမ်းမကြီးပေါ်
ချိုးကွေ့ဖို့ အတန်ကြာအောင် စောင့်နေရသည်၊ တ၀ီဝီ ဖြင့်
ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်းနေသော ကားတန်းရှည်ကို သူတို့ စောင့်နေ
ရသေးသည်၊ ထိုအချိန်တွင် လမ်းသွယ်လေးထိပ်ရှိ စောစောက
ကလေးငယ်လေးနှစ်ဦး ပြေးဝင်သွားသော အိမ်ကို သူ လှမ်းကြည့်
မိသည်၊ သူ မြင်တွေ့လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကို မယုံချင်လောက်
အောင် ဖြစ်သွားသည်၊ စောစောက ခရစ်စမတ်သစ်ပင်တွင် မီးရောင်
စုံ ထွန်းညှိပြီး တစ်အိမ်လုံး လှပ သပ်ရပ်နေသော ထိုအိမ်သည်
ယခု မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မဲမှောင်တိတ်ဆိတ်ပြီး အရာရာကို သူ
မဟုတ်သလို အမှောင်ထဲတွင် အထီးကျန်နေသည်၊ ရုတ်တရက်
ခပ်ဝေးဝေး တစ်နေရာမှ ကားမီးကြီးထိုးပြီး မောင်းနှင်းလာသော
ကားမီးရောင်အောက်တွင် ထိုအိမ်ကို သူ သေသေချာချာ ကြည့်
မိလိုက်သည် ထိုအိမ်သည် စောစောက မြင်တွေ့ရသလို သစ်လွင်
တောက်ပနေသော အိမ်မျိုး မဟုတ်တော့ပဲ အရာရာ ပျက်ဆီး
ယိုယွင်းနေသော အိမ်အို အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်ခု …
သူ့နံဘေးတွင် ကားမောင်းနေသော သူ့မိတ်ဆွေက လမ်းမကြီး
ထဲ ချိုးဝင်ဖို့ ဟန်အပြင်မှာ သူ့နူတ်ဖျားက … `ဂျွန် .. ခဏလေး
… ဒီအိမ်က ဘယ်လို ဖြစ်သွားသလဲ၊ ကျနော်တို့ အလာတုန်း
က ဒီပုံစံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ...´
သူ့မိတ်ဆွေက လမ်းမကြီးပေါ် ချိုးကွေ့လို့ ဆက်မောင်းရင်း …
`မေ့လိုက်ပါကွာ၊ ငါတို့ရဲ့ အမြင်တွေ မှားယွင်းသွားတယ်လို့
သဘောထားလိုက်ပါ၊ ခုနက အဲဒီအိမ်ထဲ ငါ ရောက်သွားတယ်၊
ငါ့ရှေ့က ပြေးဝင်သွားတယ်လို့ မြင်လိုက်တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်
ကို အစအနတောင် အိမ်ထဲမှာ မမြင်ရဘူး၊ ပထမ အိမ်ပေါက်ဝ
ကနေ ခေါ်ကြည့်တယ်၊ ဘာသံမှ ပြန်မထူးတာနဲ့ အိမ်ထဲဝင်ပြီး
ခေါ်ကြည့်တယ်၊ အဲဒီအိမ်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ….
ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ ဂိုဒေါင်က အဖိုးကြီးကို မေးကြည့်တော့
ဒီကာလရောက်တိုင်း ဒီအိမ်နံဘေးက ဖြတ်သွားရင် အဲလို
ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ တွေ့ရတယ်လို့ ပြောတယ် …
…... …. ….
၂၀၁၁ ခုနှစ် …
ယခု ခရစ်စမတ် ပိတ်ရက် ညနေခင်းများတွင် အတိုးချ အနားယူ
မည်ဟု ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် TV ရုပ်မြင်သံကြား ရှေ့တွင် ကျကျနန
သူ နေရာယူလိုက်သည်၊ ရုတ်တရက် သူ့ဇနီးသည်ထံမှ …
`အကိုရေ … အိမ်အတွက် ပစ္စည်းနည်းနည်း ၀ယ်ချင်လို့၊ ဒီအချိန်
ဈေးဝယ်လို့ရသေးတဲ့ အသိ ဈေးရောင်းတဲ့ လိပ်စာများရှိလား ...
(မှတ်ချက်။ ။ ခင်မင်ရင်းနှီးသော ဘလော့ဂါ မရို့စ်၏
ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (tag) တက်ပို့စ်အတွက်
ကျေနပ်မည်ဟု ထင်ပါသည် … )
Posted by ကိုအောင် at 18:07 14 comments
Posted by ကိုအောင် at 10:44 19 comments
ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဗားဆလပ်ဟာဗဲလ်ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနား(ရုပ်သံ)
ကွယ်လွန်သူ ချက်သမ္မတဟောင်း ဗားဆလပ်ဟာဗဲလ်ဟာ မြန်မာ
နိုင်ငံဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ရှေ့ဆုံးကနေ ထောက်ခံအားပေး
ကူညီခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ...
Posted by ကိုအောင် at 21:06 1 comments
Posted by ကိုအောင် at 14:21 18 comments
ကောင်းကင်ဘုံသွား ဗားဆလပ်ဟာဗဲလ်/ ဆင်ဆာ ထိသွားတဲ့ ကင်ဂျုံအီ (ရုပ်သံ)
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပရိတ်သတ် စိတ်ဝင်စားမှု အများ
ဆုံး ဖြစ်နေသော ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ ကို သရော်ထား
သည့် ဟာသဇာတ်လမ်းတို ….
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ရှေ့တန်းမှ ကူညီအားပေး ထောက်ခံ
သူ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆု ပေးအပ်
ဖို့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့သော ဗားဆလပ်ဟာဗဲလ် Vaclav Havel
အသက် (၇၅)နှစ်၊ ချက်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ခေါင်းဆာင်၊
သမ္မတဟောင်း၊ အာဏာရှင် ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို တွန်းလှန်ရာတွင်
ဦးဆောင်သူသည် ... (၁၈.၁၂.၂၀၁၁) တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်တွင်
ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက် …
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကွန်ုမြူနစ် ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီ
ယနေ့ (၁၉.၁၂.၂၀၁၁) တနင်္လာနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားရာ
မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူလူထုသည် အမိန့်ပေးစနစ်အောက်
မှ စက်ရုပ်လူသားများ ဆန်ဆန် ငိုကြွေးနေကြ ….
Posted by ကိုအောင် at 19:21 15 comments
Labels: သတင်းများ, သမိုင်း
`ပျူနိုင်ငံ´ ဘလော့ကို လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့
အကြိမ်အရေအတွက် Pageviews all time history
View Blog> Stats> Overview> All time
မိမိဘလော့ကို လာရောက် ကြည့်ရှုတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်
အနေအထားကို မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးလို့ရအောင်
Google က စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ….
၂၀၁၀ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲကာလက ရွေးကောက်
ပွဲရလဒ်သတင်းများကို up date လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်
တစ်နာရီအတွင်း `ပျူနိုင်ငံ´ စာမျက်နှာကို ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုတဲ့
အရေအတွက်ဟာ တစ်ထောင်(၁၀၀၀) ကျော်အထိ ရှိခဲ့ပါတယ် …
၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က မလွတ်ခင်
အချိန်အတွင်း မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ ပြည်သူလူထု သတင်းတွေ
ကို up date လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း `ပျူနိုင်ငံ´ စာမျက်နှာကို
အဲဒီအချိန်က ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူ များပြားခဲ့ပါတယ် …
ပျူနိုင်ငံ စာမျက်နှာကို `ဒီမိုဝေယံ´၊ `မေနှင်းအေး´၊ `ခင်ဦးမေ´
နှင့် `မြတ်လေးငုံ´တို့ရဲ့ စာမျက်နှာများမှ တဆင့် လာရောက်သူ
အများအပြားရှိတဲ့အတွက် ကိုဒီမိုဝေယံ၊ မေနှင်းအေး စာမျက်နှာ၊
အမကြီး မခင်ဦးမေနှင့် မမြတ်လေးငုံတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
Google ရဲ့ မှတ်တမ်းအရ တခြား စာမျက်နှာတွေကနေ တဆင့်
လာရောက်သူထက် `ပျူနိုင်ငံ´ စာမျက်နှာကို တိုက်ရိုက် လာရောက်
ကြည့်ရှုသူ များပြားကြောင်း သိရလို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူ
မိတ်ဆွေအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
ပျူနိုင်ငံ ဘလော့ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်
မှာ အများဆုံး ဖြစ်သော စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ စာဖတ်သူများ၊ ဒုတိယ
အများဆုံးဖြစ်သော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ယခုအခါ
မထင်မှတ်လောက်အောင် များပြားလာတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းက
စာဖတ်သူများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ….
Posted by ကိုအောင် at 13:05 24 comments
မောင်မြင့်ဇော်/လွမ်းစိမ့်/ အိုင်ဝေေ၀နှင့် တရုတ်ကလေးငယ် (ရုပ်သံ)
ဘာသာစကား လေးမျိုးကို ပြောဆိုတတ်သော
ခရီးသွားဧည့်ကြို မောင်မြင့်ဇော် …
ဒါရိုက်တာ ကိုချိုတူးဇော်ရဲ့ လွမ်းစိမ့် ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ အာဏာရှင် ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို လက်မခံသော
အနုပညာရှင် အိုင်ဝေေ၀ ...
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကားအောက်ထဲ ၀င်သွင်းတဲ့
Posted by ကိုအောင် at 13:496comments
မြိန်ရည်ယှက်ရည် သုံးဆောင်တော်မူကြပါ … ။ ။
Posted by ကိုအောင် at 19:099comments
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ခန့်က သူသည် အိပ်ခန်းတွဲများ ကပ်လျက်တည်
ရှိသော တန်းလျားတစ်ခုမှာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသည်၊ သူ၏ အခန်းသည်
တန်းလျား၏ အလယ်တွင်ရှိသော အခန်း တစ်ခန်း၊ ထိုစဉ်က သူသည်
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀သို့ မရောက်ရှိသေး၊ တစ်နေ့၌ သူသည်
ရေချိုးခန်းထဲတွင် ရေချိုးနေရင်း အစအဆုံး မသီဆိုနိုင်သော
ကြားဖူးနားဝရှိသည့် သီချင်းများကို စိတ်လွှတ်ကိုယ်လွှတ်
ဆိုညည်းနေမိသည်၊ ရေချိုးခန်းအတွင်း ရေကျသံ၊ သူ၏ သီချင်း
ဆိုသံများမှအပ မည်သည့်အသံမှ မရှိ။
ရေချိုးနေရင်း ဆပ်ပြာတိုက်ရန်အတွက် သူသည် ရေပူ ရေအေး
ခလုတ်များကို ပိတ်ပြီး ဆပ်ပြာရည်ကို လက်ဝါးပေါ်သို့ ညစ်ထုတ်
ရန် ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာရည်ဗူးဆီ လက်လှမ်းလိုက်မိသည်၊ ရေကျသံ
ရော သီချင်းဆိုသံပါ ပိတ်ထားသော ထိုခဏအတွင်း သူ့နားထဲသို့
အသံတချို့ တိုးဝင်လာသည်၊ သေသေချာချာ နားထောင်လိုက်တော့
ဘင်ဂျိုတီးသံ၊ ဟုတ်ပါပြီ၊ သူနှင့် အခန်းချင်း ကပ်လျက်တွင် နေထိုင်
သော သူ့သူငယ်ချင်း ဘင်ဂျိုတီးနေပါလား ….
ရေဆက်ချိုးရင်း သဘောကျနေသည်၊ သူနှင့် အခန်းချင်း ကပ်လျက်
တွင် နေသော သူ့သူငယ်ချင်းတို့ နှစ်ဦးသာ လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းက
လူသုံးကုန် ပစ္စည်းအဟောင်းများ (good second hand) ရောင်းချ
သော ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်၊ ထိုဈေးဆိုင်မှ ဂျပန်
လူမျိုးများ၏ တူရိယာ တစ်မျိုးဖြစ်သော ဘင်ဂျိုကို သူ့သူငယ်ချင်းက
သဘောကျပြီး ၀ယ်ယူခဲ့ပါသည်၊ သူ့အတွေးသည် ရုတ်တရက် လွှင့်
ပျယ်သွားပြန်သည်၊ … ဒီကောင် ဘင်ဂျို မတီးတတ်ဘူးလို့ သေသေ
ချာချာ ပြောဖူးပါတယ်၊ အခု ဒီဘင်ဂျိုကို ဘယ်သူ တီးနေပါလိမ့် …
ရေချိုးခန်းထဲမှ ထွက်လာကာစ ရေဆိုနေသော ဆံပင်ကို သုတ်ရင်း
တဖက်အခန်းက ဘင်ဂျိုသံကို ဆက်လက် နားထောင်နေမိသည်၊
မြူးမြူးကြွကြွ တီးကွက်တစ်ခုပါလား၊ သီချင်းတွေတောင် ဆိုလို့
ခပ်မြန်မြန်လေ အ၀တ်လဲရင်း တစ်ဖက်ခန်း အပေါက်ဝသို့ မပြေးရုံ
တမယ် ခြေလှမ်းများဖြင့် သူ ရောက်သွားသည်၊ လူခေါ် ခေါင်းလောင်
ကို အဆက်မပြတ် သူ နှိပ်လိုက်သည်၊ ဘယ်သူမှ ထွက်မလာကြ၊
အင်း … ဒင်းတို့ စိတ်လွှတ်ကိုယ်လွှတ် ပျော်နေကြတာပဲ ဖြစ်ရမယ်၊
အိမ်ရှေ့က ခေါ်လို့ မရရင် နောက်ဖေးဖက်က သွားခေါ်မည်လို့
သူ ဆုံးဖြတ်ပြီး သူတို့တန်းလျားရဲ့ နောက်ဖေးဖက်ဆီ ရောက်ခဲ့ပါတယ်၊
ကြိုးဆွဲ ယင်းလိပ်တွေအကြား တိုးဝင်နေတဲ့ အလင်းရောင် အားကိုး
ဖြင့် အခန်းအတွင်းကို သူ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်၊ နောက်ဖေး
အပေါက်ဝဖက်ကို ကျောပေးထားသော ထိုင်ခုံ တစ်ခုတွင် ထိုင်ရင်း
ဘင်ဂျိုတီး သီချင်းဆိုနေသူသည် သူ့သူငယ်ချင်း လုံးဝ မဟုတ်၊
သူ … ဘယ်သူလဲ၊ သူ့ သူငယ်ချင်း၏ လျှပ်စစ်မီး မဖွင့်ထားသော
အခန်းထဲတွင် ဘင်ဂျိုကို တီးခတ်နေသူသည် မည်သူနည်း၊
နောက်ဖေးဖက် တံခါးနှင့် မှန်တံခါးတို့ကို ထုပြီး အသံပေးလိုက်
သည်၊ သို့သော် ဘင်ဂျိုတီးသူသည် သူ့အား လုံးဝ လှည့်မကြည့်၊
လေး … ငါးခါလောက် အသံပေးသော်လည်း မသိချင်ယောင် မကြား
ချင်ယောင် ဆောင်နေမှုကို သူ လုံးဝ စိတ်ပျက်သွားပါသည်၊ ဖွင့်
မပေးလည်း နေပေါ့၊ ဒီတခါ အဟောင်းဆိုင်ဖက် ရောက်ရင် ငါလည်း
ဘင်ဂျိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် … အသံထွက်လို့ရတဲ့ တူရိယာ
ပစ္စည်းအဟောင်း တစ်ခုလောက် ၀ယ်ပြီး တီးချင်သလို တီးပြစ်အုံး
မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ကြုံးဝါးရင်း သူ့အခန်းဖက်ဆီသို့ လေးတိလေးကန်
ခြေလှမ်းများဖြင့် သူ ပြန်လာခဲ့ပါသည်၊ သူ့ အခန်းထဲ အရောက်
စားပွဲပေါ်က သူ့လက်ကိုင်ဖုန်းကို ယူကြည့်လိုက်မိပါသည်၊ miss call
ပေါင်းများစွာ ပါလား၊ အားအားယားယား ဘယ်သူတွေ ခေါ်ထားလဲ မသိ
ဟု မြည်တွန်တောက်တီးပြီး ခေါ်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်ကို ကြည့်မိလိုက်
သည်၊ သြော် … ဟိုဖက်က … ခုနက သူ့ကို အခန်းတံခါး မဖွင့်ပေးခဲ့
သော ဘင်ဂျိုတီးသံများ ထွက်ပေါ်နေသော ဟိုဖက်အခန်းက သူ့
သူငယ်ချင်းပါလား၊ … ဖုန်းကို ပြန်ခေါ်ရင်း ဆောင့်ဆောင့်အောင့်အောင့်
လေသံဖြင့် … ဘာလဲကွာ … လို့ သူက စပြောလိုက်တော့ တစ်ဖက်က
သူ့သူငယ်ချင်းမှ … ငါ ဆန်အိတ် ၀ယ်လာတာ နှစ်အိတ်ဖြစ်နေလို့
… မင်း အားရင်း ဘူတာကို ခဏလာပြီး ငါ့ကို ကူပါအုံးတဲ့ …
သူလည်း စိတ်ညစ်ညစ် ဒေါကန်ကန်ဖြင့် … မင်းအခန်းထဲမှာ ရောက်နေတဲ့
ဧည့်သည်ကို မင်း ခေါ်ပါလား … ခုနက ဘင်ဂျိုသံကြားလို့ မင်းအခန်းဖက်
ငါ ရောက်သွားတော့ … ငါ့ကို တံခါးတောင် ထ'မဖွင့်ပေးဘူး၊ ဘယ်လောက်
လူမှုရေး ခေါင်းပါးသလဲ … လို့ ဖုန်းထဲကနေ စိတ်ရှိလက်ရှိ ပြောချလိုက်
မိသည်၊ .. ဟေ့ကောင် ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ၊ ငါ့အခန်းမှာ ဘယ်ဧည့်သည်
မှ မရှိဘူး၊ ငါ အပြင်ထွက်သွားကတည်းက ငါ့အခန်းကို ငါကိုယ်တိုင် သော့
ပိတ်သွားတာ၊ မြန်မြန်လေးလာပြီး ဆန်အိတ် တစ်အိတ်လောက် ၀ိုင်းသယ်
ဤသို့ဖြင့် သူနှင့် အခန်းချင်း ကပ်လျက်တွင် နေထိုင်သော သူ့သူငယ်ချင်း
တို့ နှစ်ဦးသား ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို စတင် တွေ့ကြုံ
ခဲ့ပါသည်၊ သူ့သူငယ်ချင်း ပြောပြသော စကားများအရ ညဖက် တခါတရံ
တွင် သူ့အခန်းအတွင်း ထူးထူးခြားခြား အသံတချို့ ကြားရကြောင်း၊ ဘာသံ
ဟု တိတိကျကျ ပြောဖို့ခက်ကြောင်း၊ တခါက သူ့သူငယ်ချင်း အိမ်သာ
တက်နေစဉ် ဧည့်ခန်းဖက်ဆီမှ ဘင်ဂျိုတီးသံလိုလို TV က ထွက်လာသော
အသံလိုလို အသံများ ကြားရကြောင်း၊ သို့သော် သူတို့ နှစ်ဦးက တစ္ဆေ
သရဲ၊ နာမ်ဝိညာဉ်များ ပရလောကသားများကို မယုံကြည်ကြ၊ တခြား
အသိမိတ်ဆွေများ၏ အကြံပေးချက်အရ ပစ္စည်းအဟောင်း ရောင်းဆိုင်မှ
သူတို့ ၀ယ်ယူခဲ့သော ဘင်ဂျိုကို နောက်ထပ် တစ်လလောက်
အကြာတွင် ကြက်ခြေနီ ကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့၏ အမှိုက်ပုံး အတွင်းသို့
သူတို့နှစ်ဦး စွန့်ပြစ်ခဲ့ကြသည်၊ ထိုနောက် သူ့သူငယ်ချင်း၏
အခန်းထဲက အသံများ … သတင်းများကို ထပ်မကြားရတော့ …။
လွန်ခဲ့သော တစ်လ ၀န်းကျင်လောက်က သူ အလုပ် လုပ်သော
ဈေးဆိုင်မှ သူ့မိတ်ဆွေက သူ အပါအ၀င် အလုပ်ထဲက မိတ်ဆွေ
များကို သူတို့အိမ်၏ ထူးထူးဆန်းဆန်း အသံများအကြောင်း ပြောပြ
သည်၊ သူတို့အိမ်၏ ကားဂိုဒေါင် အတွင်းမှ ညဖက်များတွင် အသံ
တချို့ ထွက်လာလေ့ရှိကြောင်း၊ သူတို့မိသားစု ထ'ကြည့်သောအခါ
ထိုအသံများ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း ပြောပြသည်၊
စိတ်ဝင်းစားသော သူနှင့် သူ့မိတ်ဆွေတို့တွင် တူညီသော အချက်
တစ်ခုရှိသည်၊ ထိုအချက်က သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ဂျာမန်ဘောလုံးအသင်း
၏ ကစားပုံကို နှစ်ခြိုက်သဘောကျမှုပင်ဖြစ်သည်၊ လွန်ခဲ့သော
ရက်သတ္တပတ် (၂)ပတ်ကျော်ခန့်က ဂျာမန်အမျိုးသား လက်ရွေးစင်
ဘောလုံးအသင်းသည် နယ်သာလန် ဘောလုံးအသင်းနှင့် ချစ်ကြည်
ရေးအဖြစ် ကစားကြမည့် ညနေခင်းတစ်ခုတွင် သူသည် သူ့မိတ်ဆွေ
အိမ်သို့ အလည်အပတ် ရောက်ဖြစ်ခဲ့တော့သည်၊ တခါတရံ ထူးခြား
ဆန်းကြယ်စွာ သို့မဟုတ် ညစဉ် အသံများ ထွက်ပေါ်လေ့ရှိသော
သူ့မိတ်ဆွေ၏ ကားဂိုဒေါင်အတွင်း သူ့အား သူ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူက လိုက်လံ
ပြသသည်၊ သူ သတိထားမိလိုက်သည့် အရာက ကားဂိုဒေါင်၏ ထောင့်
နေရာတွင် ဖုန်အနည်းငယ် တက်နေသော စန္ဒယားအိုတစ်ခု၊ … ဒါ ဘယ်သူ
စန္ဒယားလဲလို့ သူ မေးလိုက်တော့ … သူ့မိတ်ဆွေက ကွယ်လွန်သူ
သူတို့အဖိုး၏ ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော
သူ့အဒေါ်အငယ်ဆုံးအား မသေခင် အမွေပေးခဲ့သော ပစ္စည်းဖြစ်
ကြောင်း၊ သူ့အဒေါ်က လာရောက်မသယ်ဖြစ်သေးသောကြောင့် သူ့
ကားဂိုဒေါင်ထဲမှတပါး စန္ဒယားထားဖို့ သူ့အိမ်ထဲတွင် နေရာလုံးဝ မရှိဟု
ဂျာမန်ဘောလုံးအသင်း၏ လှပသော တိုက်စစ်များအောက်တွင်
အသဲအသန်း ခုခံတွန်းလှန်နေရသော နယ်သာလန် ဘောလုံးအသင်းတို့
ကစားပုံကို ကြည့်ရင်း သူ့နားထဲ စန္ဒယားတီးသံလိုလို အသံတစ်ခုကို
ကြားနေမိသည်၊ ဘောလုံးပွဲ ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်းအကြား TV ကအသံ
ကို လျှော့ချရင်း သူ့မိတ်ဆွေ ကမ်းလိုက်သော ကော်ဖီကို သောက်ဖို့ ဟန်ပြင်
လိုက်သည်၊ ငြိမ့်ညောင်းသာယာသော စန္ဒယားသံကြောင့် သူ့မိတ်ဆွေအား
... အခု စန္ဒယားတီးနေတဲ့သူက ဘယ်သူလဲဗျ၊ နားထောင်လို့ ကောင်းလိုက်
တာဟု ပြောလိုက်သောအခါ မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက် ဖြစ်နေသူက သူ့မိတ်ဆွေ၊
အိမ်အပြင်ဖက် သွားကြရအောင် သူ့မိတ်ဆွေ၏ တီးတိုးပြောသံနှင့်အတူ
သူတို့နှစ်ဦးသာ အိမ်ပေါက်ဝတံခါး၏ လက်ကိုင်ကို ဖြေးဖြေးချင်း လှည့်ဖွင့်ရင်း
အိမ်ပေါက်ဝနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ရှိသော ကားဂိုဒေါင်ကို ကြည့်နေမိသည်၊
မဲမှောင်တိတ်ဆိတ်နေသော ကားဂိုဒေါင်အတွင်းမှ ထွက်ပေါ်နေဆဲ စန္ဒယား
သံကို နားထောင်ရင်း သူ့လက်ပေါ်တွင် ကြက်သီးဖုလေးများ ထွက်လာသလိုလို၊
စန္ဒယားတီးသံနှင့်အတူ ထွက်ပေါ်နေသော သီချင်းဆိုသံက အသက်ကြီးကြီး
အမျိုးသားတစ်ဦး၏ အသံ၊ ဒီလောက်မှောင်မဲ တိတ်ဆိတ်နေသော ကားဂိုဒေါင်
ထဲတွင် မည်သူသည် ဤကဲ့သို့ တီးခတ်သီဆိုနေပါသနည်း၊ ခေါင်းငိုက်စိုက်ဖြင့်
မျက်နှာအနည်းငယ် နီရဲနေသော သူ့မိတ်ဆွေက ကားဂိုဒေါင်ဘေးဖက်မှ
တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်သည်၊ တံခါးဖွင့်လျှင် အလိုအလျောက် လင်းသွားတတ်
သည့် လျှပ်စစ်မီးကြောင့် ကားဂိုဒေါင်၏ နေရာအနှံကို သူတို့နှစ်ဦးသာ မြင်နေ
ရသည်၊ သူ့ မျက်လုံးများက ထောင့်တစ်နေရာတွင် ဖုန်တက်နေသော စန္ဒယားအို
ကြီးကို ကြည့်ရင်း ကြက်သီးများ တဖြန်းဖြန်း ထ’လျက်ရှိသည်၊ စန္ဒားခလုတ်များကို
ဖုံးအုပ်ထားသော သစ်သားအဖုံးကို သူ့မိတ်ဆွေက ဖွင့်လိုက်သောအခါ စန္ဒယား
ခလုတ်များကို မရဲတရဲ သူ ကြည့်နေမိသည်၊ ရုတ်တရက် သူ့နှာခေါင်းထဲသို့ တိုး
၀င်လာသော အနံ့တစ်ခုကို ရှုရှိုက်မိလိုက်သည်၊ ဆေးတံဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်
သည့် အနံ့၊ သူ့မိတ်ဆွေရော သူပါ ဆေးလိပ်သောက်သူများ မဟုတ်၊ စဉ်းစားလို့
အဖြေ ပေါ်မလာသော အရာများကို ကျောခိုင်းပြီး သူတို့နှစ်ဦး ကားဂိုဒေါင်မှ
တနေ့က သူတို့မြို့ ကြက်ခြေနီအသင်း၏ ကုသိုလ်ဖြစ် ပစ္စည်းအဟောင်းဈေးဆိုင်
ရှေ့က သူ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့သည်၊ အိမ်ထောင်ပြုကာစ သူ့မိတ်ဆွေ ဇနီးမောင်နှံ
နှစ်ဦး ထိုဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်လာသည်ကို တွေ့လိုက်သောကြောင့် နူတ်ဆက်ရန်
အတွက် ခေတ္တရပ်နေမိသည်၊ သူ့မိတ်ဆွေ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး ၀ယ်ယူလာသော
သူတို့လက်ထဲက အနုပညာ တူရိယာတစ်ခုကို ကြည့်ရင်း သူ့ ပါးစပ်က မည်သို့
မည်ပုံ အဟောင်းသာ ဖြစ်သွားသည်ကို သူကိုယ်တိုင် မသိခဲ့ ....
Posted by ကိုအောင် at 17:47 14 comments
Posted by ကိုအောင် at 19:03 11 comments
ကျွန်တော် မှတ်မိသမျှ ကိုမောင်မောင်ကြွယ် (အပိုင်း-...